Akụkọ - Otu esi ahọpụta ezigbo igwe eji ere ere?
Olee otú ịhọrọ nri otu pelletizing igwe?
Ngwaahịa plastik na-arụ ọrụ dị mkpa n'akụkụ dị iche iche nke mmepụta ihe na ọrụ ugbo na ndụ yana ezigbo njirimara ha dịka ịdị arọ, ike dị elu, nguzogide corrosion, na nhazi dị mfe. Otú ọ dị, site na iji ngwa ngwa plastik eme ihe n'ọtụtụ ebe, mkpofu ahihia plastik aghọwo nsogbu siri ike, otu n'ime "ihe siri ike iweda onwe ya ala" abụrụla nsogbu na-adịghị ala ala nke kwesịrị ịgwọta ngwa ngwa na mmetọ gburugburu ebe obibi.
N'afọ ndị na-adịbeghị anya, site na mmepe ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ plastik mba m, ụlọ ọrụ plastic granulator amalitekwala n'ike n'ike. The granulator nwere ike ime ka recycled plastic ngwaahịa n'ime plastic pellets site dị iche iche Filiks iji nweta mmetụta nke plastic imegharị ihe maka iji. Thelọ ọrụ granulator na-agụnye ọtụtụ mpaghara nke akụ na ụba mba. Ọ bụghị naanị njikọ njikọ dị oke mkpa dị mkpa maka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaahịa na ọrụ ubi, kamakwa ọ na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịdobi mmetọ plastik nke mba m, na-abawanye ọnụego mmegharị nke ngwaahịa plastik, na ịtọlite ​​usoro ịmegharị plastik zuru oke. .
Maka ụlọ ọrụ plastik emegharịrị, otu esi ahọpụta pelletizer kwesịrị ekwesị maka ojiji nke ha dị ezigbo mkpa, n'ihi na pelletizer plastik enweghị ike ịmịpụta plastik niile n'ihi nrụgide plastik na nrụgide extrusion dị iche iche. General granulators nwere ike imegharị na granulate plastik na ndụ kwa ụbọchị, mana dị ka ụfọdụ plastik pụrụ iche, dị ka injin plastik, polyethylene jikọrọ cross, akwa akwa, wdg, a ga-enwerịrị granulators pụrụ iche. Ya mere, ndị nrụpụta kwesịrị ị musta ntị na ụdị plastik ha kwesịrị imegharị mgbe ha na-azụ pelletizer, wee họrọ pelletizer kwesịrị ekwesị.
Na mgbakwunye, mgbe ị na-azụta mkpụrụ ọka, ịkwesịrị ị attentiona ntị na isi ihe ndị a:
Dokwuo anya na ebumnuche na nzube nke ịzụta granulator. Ka ọ dị ugbu a, e nwere ihe dịka ụdị ndị ahịa atọ na-azụta granulators n'ahịa. Ndị ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ nke ha ji aka ha tinye ego ma bido ha. Ndị na-emepụta plastik na-azụta ndị na-edozi ahụ iji dozie nsogbu nke ihe fọdụrụ na ụlọ ọrụ ha. Mgbe ahụ enwere ndị na-ekesa ya na azụmaahịa azụmaahịa. Maka ndị ahịa bidoro azụmaahịa nke ha ma ọ bụ ụlọ ọrụ nke ha, ha ga-edo anya ụdị plastik nke ụlọ ọrụ ahụ mepụtara mgbe ha na-azụ pelletizer. General pelletizers nwere ike ịmegharị ma mepụta plastik izugbe na-adabere na PP na PE, nke bụkwa ihe a na-ahụkarị na plastik n'ahịa plastik. The PS ụfụfụ ihe ahịa dịtụ obere. Ọ bụrụ na e nwere ọwa ahịa doro anya maka plastik pụrụ iche, ndị ọrụ nwekwara ike ịzụta pelletizers kwekọrọ.
Ihe arụmọrụ nke granulator. Enwere ike ịkekọrịta ndị nwere ike ịbanye n'otu granulators na twin-screw granulators dịka ọnụọgụ nke kposara. Mgbe otu ọkpọ na-arụ ọrụ, a na-ebute plastik ahụ na gburugburu na gbọmgbọm. Mgbe ejima-ịghasa granulator na-arụ ọrụ, a na-ebute plastik ahụ n'ahịrị kwụ ọtọ na gbọmgbọm ahụ. Dị ka ụkpụrụ ọrụ si dị, mgbe ejiri igwe ejima ejiri mechie, ihe dị na igwe ahụ nwere ike bụrụ ihe efu, na igwe ntanetị nwere ike ịchekwa obere ihe. Enwere ike ịkpụcha ọtụtụ plastik, na otu-na ejima-ịghasa nwere ike iji na-enweghị ọdịiche.
Otú ọ dị, mgbe ị na-emegharị plastik, n'ihi nnukwu elu nke ebu na-agbanwe ihuenyo na mfe blanking, otu igwe na-arụ ọrụ dị irè karị; mgbe ị na-eme plastik gbanwetụrụ, masterbatches agba, na mgbapụta agba agba agba agba, mmetụta nke igwe abụọ ahụ hà. ; Mgbe ị na-eme eriri iko dị ogologo na ihe ndị nwere eriri USB nwere ike ijikọta, ọ bụ naanị ụmụ ejima ejirila. Tụkwasị na nke a, n'ihe metụtara ị nweta igwe na ịkwụ ụgwọ nrụpụta mgbe emesịrị, ohere ịmịkọ otu na-adịkarị ala, ebe ejima-ịghasa granulators nọ na nnukwu nsogbu. Ya mere, mgbe ịzụrụ akụrụngwa, ọ dị mkpa ịhọrọ akụrụngwa kwekọrọ na ngwaahịa dịgasị iche iche nke ụlọ ọrụ ahụ mepụtara.